Andravoahangy : nodiovina ny manoloana ny CSB II | NewsMada
Andravoahangy : nodiovina ny manoloana ny CSB II
Loto, fofona ratsy ary fotaka… Ireo no iainan’ny mponina mandalo sy mivezivezy eny amin’ny faritra Andravoahangy Tsena manoloana ny CSB II iny rehefa avy ny orana. Nanadio izany toerana izany ny avy ao amin’ny boriborintany fahatelo omaly.
40 miandahy ireo niara-niisalahy tamin’ireo ekipa avy tao amin’ny lapan’ny Tanàna izay efa voaofana manokana momba ny fanadiovana.
Nesorina ny fako nanoloana ny CSB II nentanina ny olona mba hitandro hatrany ny fahadiovana ary hanao ny loto avy hatrany any anaty dabam-pako ireo mpivarotra nanodidina. Nalamina ihany koa izy ireo haka sisiny sy hiditra anaty tsena mba tsy hanelingelina ny fifamoivoizana.
Hisy ny fepetra horaisina mahakasika ny toerana malalaka izay nataon’ny olona fanariana fako eny an-toerana sy lasa toeram-pivarotana rehefa vita izao fanadiovana faobe izao. Vinavina ny hanidy sy hanisy mpiambina izany toerana izany mba tsy hahazoan’ny olona miditra intsony.
“Tena sarotra tokoa raha ny asa izay natao androany, nitaky fahavononana ara-tsaina sy ara-batana izany satria « loto » no nolalaovina”, hoy ireo ekipa nifarimbona teny. Izany indrindra ny tokony hahatsapan’ny tsirairay ny andraikitra tandrify azy avy mba hanamora ny fiaraha-miasa.